खादाले वक्षस्थल ढाक्नु अपराध हो ? | | Infomala
खादाले वक्षस्थल ढाक्नु अपराध हो ?
केही समय अगाडि कलिउडकी नायिका शुभेच्छा थापाले खादाले वक्षस्थल ढाकेर फोटोसुट गरिन् । जुन निकै विवादास्पद बन्यो । जसका कारण नेपाल चलचित्र कलाकार सघंले उनलाई ६ महिनासम्म चलचित्र सम्बन्धि कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको छ। त्यति मात्र होइन नायिका थापा स्वयंले क्षमा मागी सकेकी छिन् ।
यो विवाद उठीसकेपछि मान्छेहरूका आ-आफ्ना विचार हुनु स्वाभाविक हुन्छ । हुनसक्छ नायिका थापाले चर्चाको लागि त्यसो गरेकी हुन् । र यो पनि साधारण सत्य हो की उनले नेपाली समाजमा नपच्ने काम गरेकी छन् । तर यसलाइ बबन्डर गल्तीका रूपमा लिनु पनि अतिवाद कै अर्को रूप हो । अनि चलचित्र कलाकार सघंले यस ढङ्गले कार्यवाही गर्नु पनि तालीवानी शैलीको परिचायक हो । चलचित्र कलाकार संघ भनेको अनुदार सेन्सर बोर्ड हो ? संघको नेतृत्वले परिवर्तनशील र उदार सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिएन ।
समाजमा धर्मभिरूहरू हुन्छन् । अनुदारवादीहरू हुन्छन् । त्यस्ता समयको प्रवाह नबुझ्नेहरू समाजमा बहुमतमा हुन सक्छन् र ती कहिलेकाँही आक्रामक बन्न सक्छन् । तर नेतृत्वमा बस्नेहरूले समयको प्रवाह र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।
खादाले वक्षस्थल छोपिनु खादाको अपमान हो भन्ने कुरामा मान्छेपिच्छेको विचार हुनसक्छ । निश्चित रूपमा खादा बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको पवित्र बस्तु हो । धार्मिक आस्थाबाहेक पनि यो नेपाली समाजमा सम्मान गर्ने सगुनको रूपमा लिइन्छ । सौभाग्यका रूपमा लिइन्छ । त्यसको अर्थ वक्षस्थल छोप्न र पहिरनको रूपमा लगाउन मिल्दैन भन्नु अन्धविश्वास मात्र हो । भित्री कपडा लगाइँदा त्यो खादा त्यहीँ ठीक, भित्री कपडा नलगाइँदा बेठीक भन्नु पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको सोचाइको फरक मात्र हो । नायिका थापाले सम्मानपूर्वक खादालाई त्यसरी लगाउनु बबन्डर गल्ती ठान्नु जरूरी छैन । किनकी खादाप्रति उनको आस्था उत्तिकै उच्च छ । यो केवल शैलीको कुरा मात्र हो । यति मात्र हो- उनको त्यो पोज नेपाली समाजमा सजिलै पच्दैन ।
यदी कसैले फूलको मालाले स्तन छोप्यो भने फूलको अपमान मान्ने की नमान्ने ? किनकी हिन्दूहरूलाई त्यो फूलको अपमान लाग्नसक्छ । अपवित्र लाग्नसक्छ । यी यस्ता कुरा हुन्, मान्छेपिच्छेको श्लिल र अश्लिल भन्ने धारणा हुनसक्छ ।
कलाकार भनेका राष्ट्रका गहना र ढुकुटी हुन् । उनीहरू समाजका ऐना हुन् । उनीहरूबाट समाज र राष्ट्रले राम्रा कार्यको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूको काम र व्यवहारले समाजमा तिब्र प्रतिकृया/असर पैदा गर्छ । यो पनि सत्य हो की कलिउडदेखि बलिउड र हलिउडसम्म कलाकारहरू एक कदम ज्यादा उदार हुन्छन् । र समाज परिवर्तनको नवीन शैली बसाल्छन् ।
विदेशतिर नजर लगायौं भने अमेरिका, यु. के. र जर्मनीका झण्डाहरू कतिपय कलाकारहरूले अण्डरवेयरका रूपमा प्रयोग गरेर फोटो खिचाएको देखिन्छ । नेपाली समाजको सोचाइबाट हेर्दा कतिपयलाई लाग्नसक्छ त्यो राष्ट्रिय झण्डाको अपमान हो । तर यस्ता घटनाहरू पश्चिमी समाजमा पचीसकेका छन् र तिनले अपमानको रूपमा नहेरी कला वा एक सामान्य घटनाका रूपमा हेरीदिन्छन् ।
त्यसैले नायिका थापाको खादा प्रकरणलाई अतिरंजित गर्नु आवश्यक छैन । अन्धविश्वासीले दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ । यो सिर्फ अन्धविश्वासलाई चुनौति हो र नेपाली समाजमा रहेको श्लिल-अश्लिलको लक्ष्मण-रेखाप्रति अवज्ञा हो ।
Previous Postनेदरल्याण्डसबाट गौतमको दुर्इ दिने माया
Next Postअसल बुहारी कि दाइजो ?
Post Category:प्रमुख समाचार / मनोरंजन / महिला संसार